Okpukpo ogwu (Oblean) uzuzu (282526-98-1) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Ceilistat (Oblean) ntụ ntụ
Rating: SKU: 282526-98-1. Category: Ọla abụba
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Ceilistat (Oblean) ntụ (282526-98-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Akwukwo (Oblean) uzuzu isi ihe
Usoro Molecular: C25H39NO3
Molekụla arọ: 316.31
Aha Igwe: Ceilistat ntụ ntụ
Aha aha: Oblean uzuzu
Akwukwo (Oblean) uzuzu Uzo
Akwukwo (Oblean) uzuzu bu onye na-egbochi lipase pancreatic, nke na-agbaji triglycerides na eriri afọ. Enweghị enzyme a, a na-egbochi triglycerides site na nri ka a ghara ịkụnye ya hydrolyzed n'ime abụba abụba na-enweghị ike ịnwụ ma hapụ ya ka a ghara ịhapụ ya. Ọgwụ a, ọ bụ ezie na yiri nke ọgwụ FDA na-akwado ugbu a, nwere ike ịnwe ntanetị mmetụta dị nro site na nhazi dị iche iche. Usoro ọmụmụ 2 na-amụ ihe gbasara 612 obese, ndị na-arịa ọrịa shuga na BMI nke 28 na 45 kg / m2 maka oge nhazi 12 izu. Ọkụ a na-edozi na 80 na 120 mg kwalitere nnukwu ibu ma e jiri ya tụnyere placebo (kg 3.85 na 4.32 n'arọ vs. 2.86 n'arọ, n'otu n'otu). Akuku ntụ ntụ nke na-egbuke egbuke na-emetụta ihe nrịta dị arọ nke na-enweta na ntụ ntụ (3.78 kg). A kwadoro ntụ ntụ a na-edozi nke ọma na egosiputa ole na ole site na ihe ọjọọ karịa ebe a na-etinye ebe a na-ahụ maka ebe a. Nyere na nkwụsịtụ ahụ na ngwongwo ntụpọ bụ nke dị njọ karịa 120 mg Oblean ntụ ntụ na placebo dị iche iche, ọ bụkwa n'ihi ihe ọjọọ ọkpụkpụ nke na-akpata ọrịa, Ceilistat ntụ ntụ nwere ike ịghọ onye na-egbu egbu egbugbere ọnụ maka ọhụụ ọnwụ. Ọnwụnwa nke 3 nke Oblean ntụ ntụ na-aga n'ihu ugbu a na Japan.
Kedu ihe bụ usoro ogwu nke Oblean
A na-enye ọgwụ onu ogwu uzo dị ka ihe na-eme ka capsules 60mg maka nlekọta ọnụ. A na - eji ọgwụ na - eri nri iji jide n'aka na ọ nwere ike ịrụ ọrụ mgbe nri a na - eri nri, nke mere na enwere ike iwepụ abụba sitere na nri ahụ n'ụzọ dị irè. Dọkịta gị ga - enye gị ndụmọdụ ole na ole ị ga - eji ọgwụgwọ ọ bụla mee, dịka ị na - edozi usoro a chọrọ kwa ụbọchị. Ọ dị ezigbo mkpa na ị na-agbaso ntụziaka ndị a. Ejila ihe karịrị dọkịta gị agwa gị ka ị were.
Kedu ka osiilistat ntụ si arụ ọrụ
Ihe na-eme ka a na-eme ka a na-eri nri na-eri obere calorie. Ọ na-arụ ọrụ site na igbochi oke ụba nke abụba ka a ghara ịgbada ma tinye ya n'ahụ. Akpa ntụ ntụ dị arọ a na-ekewa dịka onye na-emepụta lipase na ọ na-arụ ọrụ na usoro digestive ebe ọ na-egbochi ihe egbugbere ọnụ lipolytic a na-akpọ lipase. Akwukwo a bu ihe aru na-eji mee ka abuba di ocha. Ot'odi, mgbe a na-enye ogwu a n'akuku nri, o na ejiko ya na egbugbere ọnụ, si otú a gbochie ha ka ha ghara igbatuba abuba. Ụdị nke a na-adịghị etinye mmiri na-eme ka ọ bụrụ nke a na-emeghị ka ọ bụrụ nke na-eme ka ọ ghara ịdị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ụbụrụ na-egbuke egbuke ma belata abụba. Mgbe ejiri ya na nri calorie dị ntakịrị, ọ nwere ike inye aka melite ọnwụ ọnwụ ma mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị ọrịa buru ibu ka ha laghachi azụ, si otú ahụ na-eme ka ohere ịnweta ọnwụ na-efu. Otú o si eji ya eme ihe dị ka ntụpọ kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ na-egbochi lipase pancreatic.
A gaghị atụ aro ka ị were karịa 3 capsules n'ime awa 24.
Gaa n'ihu ụlọ ọrụ mberede kacha nso gị ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ mmeghachi omume. Mgbaàmà ndị na-ejikọta na mmeghachi omume dị otú ahụ gụnyere ike iku ume ma ọ bụ ilo ihe, mkpuchi obi, ọzịza, mgbakasị anụ, na hives.
Ceislim anaghị adị mma maka ndị ọrịa niile. Gwa onye nlekọta ahụike gị mgbe ị na-eji ọgwụ a ma ọ bụrụ na ị dị ime, na-enye nwa, na-agbalị ịtụrụ ime, na-eji ọgwụ ọ bụla (ọgwụ ma ọ bụ ndenyeghị ọgwụ), na-eji ngwaahịa ọgwụ ma ọ bụ mgbakwunye, maọbụ ọ bụrụ na ị nwere allergies ma ọ bụ ahụike ọzọ nsogbu.
Ezigbo usoro onu ogwu na ntughari na-adabere na onye ọrịa na ọnọdụ a na-emeso ya. Adịghị edozi usoro ọgwụgwọ gị n'emeghị nkwado nke onye nlekọta ahụike gị. Ngwaahịa a bụ maka iji mee ihe dị ka ihe edere na ntụziaka.
Powder Powder Na Na Na
Akwukwo (Oblean) uzuzu ahia
Okpukpo Ogwu (Oblean) uzuzu nwere ihe di iche
Ndị ọrịa na-enye ọgwụ maka oké ibu na Ceislim ntụ ntụ nwere ike ịta ahụhụ site na mmetụta ndị dị na ya. Ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na nke a emee. E nyere ụfọdụ ihe atụ ebe a:
Mbibi nke ụda
Ọ bụ mgbe niile
Mgbu na afo
Ọ bụ ezie na a na-elekarị mmeghachi omume dị nwayọọ anya dị ka ihe na-emekarị, ihe ọjọọ dị njọ nwere ike ime. Gwa dọkịta gị ozugbo ka nke a mee.
Esi zụta Oblean ntụ ntụ: ịzụta ceilistat ntụ ntụ si AASraw